Lone Lone – Petunity
မီးမီးလုံးလုံးလေးက သူ့ကိုတကယ်အချိန်ပေးနိုင်မယ့်သူကို ရှာနေပါတယ်။
မီးမီး အသက် ၂နှစ်ကျော်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပါတယ်။ *(မွေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေး ပုံမှန်ထိုးပေးရန်၊ သန်ချပေးရန်နှင့် မွေးလာတဲ့ကလေးတွေပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့မလွယ်ရင် သားဆက်ခြားဆေးထိုးမယ့်အစား သားဥအိမ် ထုတ်ပေးစေလိုပါတယ်) * 💕
မီးမီးက အဆော့သန်ပါတယ်နော်။ မီးမီးကို တကယ်ချစ်ပေးမယ့်သူရှိရင် မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ messenger ကိုလာခဲ့ပါနော်။ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Covid-19 rules တွေအရ အဆင်ပြေတဲ့အခါမှ ခေါ်ယူမွေးစားပေးရန် လိုအပ်ပါမယ်နော်။💕
Can you really be my playmate? Are you looking foratrue friend?
Lone Lone is available forasweet and loving home!
She is2years old, vaccinated and the breed is Pomeranian. If you're interested to adopt, kindly discuss it with the family first and let us know in messenger. You can only bring her home when the Covid-19 rules are flexible.
(If you're sure not to let her have babies when you adopt, we suggest to have her spayed, also dewormed and well vaccinated.)